देउवाको नयाँ कार्यसमितिमा नेताहरुको चालखेल
नेपालदृष्टि । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको नयाँ कार्यसमितिमा नेताहरुको वरियताक्रम तोकेका छन् । देउवाले आफूसँग सभापतिमा पराजित भएका डा. शेखर कोइरालालाई भने २०औं वरियतामा राखेका छन् ।
वरियता तोक्ने क्रममा देउवाले आफूपछि रामचन्द्र पौडेललाई दोस्रो वरियतामा राखेका छन् । त्यस्तै, नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई उनले तेस्रो स्थानमा राखेका छन् । १४औं महाधिवेशनमा पौडेल मतदानको प्रक्रियाबाट अलग भएका थिए । उनीहरुलाई देउवाले मनोनित गर्नेछन् ।
देउवाले आफूलाई पहिलो, दोस्रोमा पौडेल र तेस्रो सिटौलालाई वरियता तोकेको तर आफूसँग सभापतिमा पराजित नेता शेखरलाई भने २०औं वरियतामा राखेकोमा नेताहरुले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । कांग्रेसमा सभापतिसहित १३ जना पदाधिकारी रहन्छन्। त्यसपछि अन्य दुई नेतापछि मात्रै २० नम्बरमा कोइरालालाई राखिएको छ। - रिपोर्टर्स नेपाल
किन एमसीसी पारित गराउन प्रम देउवा आतुर ?
एनआरएनएका कोषाध्यक्ष कुँवरको घर जग्गा रोक्का
आठ खेलमा ६६२ खेलाडी सहभागी
किन, प्रदेश सरकार नालायक सावित ?
“धेरै कागजपत्रको छुट्कारा हो परिचयपत्र”-चापागाँई (भिडियो सहित)
झुनु म तलाइ असाध्यै मन पराउछु
मोबाइल गेमको सपना